Irobhothi yokuThengisa • Igolide, ioyile, i-Forex kunye ne-Crypto
IiBots zokuRhweba kunye neCryptobots
Imodeli yeshishini yeenkampani zorhwebo inika abatyali-mali ithuba lokuthatha inxaxheba kwiimarike zezemali zezezimali, izinto zorhwebo, izinyithi ezixabisekileyo kunye ne-cryptocurrensets. Ngeerobhothi zokuthengisa ezikhoyo, awudingi naliphi na amava okanye izakhono kwezemali okanye kuphuhliso lweIT. Ke vumela ii-algorithms zokurhweba zikhathalele ikomkhulu lakho ngobukrelekrele nangenyameko, sibakhethele yona.
Ngobubele, ndiya kukukhokela kwaye ndiphendule imibuzo yakho, kodwa khumbula ukuba umngcipheko welahleko ubaluleke kakhulu njengenzuzo eqokelelweyo. Tyala kuphela isixa olungele ukuphulukana nayo. Qala kwaye uvavanye iirobhothi ezicetywayo kunye nenkunzi encinci yokuqalisa ukuqonda isicwangciso sabo.
Ulwazi oluncinane olufunekayo
Yenza umrhumo wokwenza okuzenzekelayo ngokutyala ngobulumko.
Phantse akukho nto yokwenza!
Bhalisa, faka imali yakho kwaye uvumele iirobhothi zithengisele wena.
Qokelela umvuzo wakho rhoqo kunye nazo zonke iimali zakho ngawo onke amaxesha.
Iirobhothi zokurhweba kunye namathuba emali
Iirobhothi zokuthengisa zivavanyiwe iinyanga ezininzi, zithembekile kwaye zisebenza ngokufanelekileyo
Kuba urhwebo luyekile ukuba lilungelo leengcaphephe, iirobhothi zokurhweba zingene kwi-Intanethi kwaye zinokwenza inzuzo yezemali kumntu ngamnye. Ezi robhothi ziye zaziwa ngokurhweba ngokuzenzekelayo, egameni labasebenzisi bazo, zibagcinele ixesha elixabisekileyo. Njengoko kukho ubuqhetseba obuninzi kulo mbandela, siyavavanya, sihlalutya kwaye sicebisa ezinye iibhothi zokurhweba ngakumbi kunabanye.
Yenzelwe ukuba ithengise i-XAU / i-USD ngababini ngolawulo lomngcipheko ophantsi kunye nesicwangciso esiliqili sexesha elifutshane. I-Scalping enikezelwe kwimarike yegolide.
Yenzelwe ukurhweba kwimarike ye-cryptocurrency kwaye ikakhulu iBitecoin BTC enoguquko oluphezulu kakhulu lwemarike.
✅ Ukuthengisa ngeCrypto
I-AutoTrade Forex yimarike yemali esekwe kwi-Indonesia. I-Autotrade Forex iya kufumaneka ngehlobo lowe-2021.
Yenzelwe ukurhweba kwintengiso yeoyile. Ioyile ye-Autotrade iya kujolisa ekubhejeleni phezulu okanye ezantsi kuxhomekeke kwixabiso lombhobho weoyile.
Kuye kwamisa irobhothi
UFin 888 yirobhothi yorhwebo yase-Indonesia esekwe kurhwebo lwemali ye-fiat. I-Fin888 yayiyirobhothi ezinzileyo kodwa ingasebenzi kakuhle kuneAutotrade Gold.
I-Ecosystem yeerobhothi ze-18 ezibandakanya i-2 kwi-crypto exhunywe kwi-API Binance. Ezinye iibhothi ziya kudityaniswa ne broker ilawulwa yi-Equiti.
✅ IFlashBot, iFlashCoin...
Yenzelwe ukurhweba nge-EUR / USD pair, eyona ndlela iphambili yokusebenza kwe SmartXBot isekelwe kwindlela kunye norhwebo lwezikhundla ezimfutshane. Ukusebenza ngaphantsi kwe-ATG.
Smartxbot / Inet89
Enye yezona zinto zingcono kakhulu zokutshintshiselana zibonelela ngezicwangciso ezi-4 zerobhothi ngokwemali efunwayo ngababini.
Inkqubo yokuthenga igolide kunye nedayimani ngentlawulo kwimali ye-Fiat, ukudluliselwa okanye i-crypto.
Irobhothi yorhwebo yaseIndonesia ithengisa imarike yegolide. Inkqubo yokwabelana ngenzuzo efana Smartxbot.
Irobhothi yorhwebo yase-Indonesia ithengisa imarike ye-crypto e broker Lotus International.
Irobhothi yorhwebo esekwe kwintengiso ye-Forex.
Eyilelwe ukurhweba nge-EUR / USD, i-Coved yenye yezona software zibalaseleyo zidityaniswe nobukrelekrele bokuzenzela kunye nenye yeetekhnoloji zolawulo lobungozi.
Yenzelwe ukuthengisa isibini se-EUR / USD ngolawulo lomngcipheko ophantsi kunye nesicwangciso esiliqili sexesha elifutshane.
❌ Incam yencam
Yenzelwe ukurhweba ngababini beemali ezininzi, i-Elitrob iyaqhubeka nokuhlalutya imarike ye-Forex, ikhangela amanqanaba aphambili eziko kunye neendawo ezinamathuba aphezulu okurhweba.
Yenzelwe ukurhweba ngezibini ezininzi zeemali kunye ne-crypto phantsi kwesicwangciso sokuthengisa kunye nosuku lokuthengisa.
Inkqubo yentengiso esekwe kwintengiso.
Marketing Intengiso ye-AI
Fumanisa iirobhothi ezi-3 ezijolise ekuhwebeni kunye nasekuthengiseni ngemini phantsi kweliso labarhwebi aba-12 abaziingcali kunye nokuthengisa ezona mali ziphambili.
Ukuphuculwa kunye nokuBeka iliso kwezinye iirobhothi zokurhweba
Siphicotha ezinye iirobhothi zokurhweba kwaye ezinye azibonakali kuthi zithembekile kwaye zizinzileyo ekuhambeni kwexesha. Nalu uluhlu olungaphelelanga lweerobhothi zokurhweba esizilandelayo ngokusondeleyo: Smart Evo, Maestrem, GoldOwam, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionnaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
Ziphephe ezi robhothi zokurhweba (Scams / Ponzi): EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
Nokuba abarhwebi ababalaseleyo bathembele kwiirobhothi ukuze baxhase iiodolo zabo kwiimarike.
Ziyakhawuleza, zibala ngokukhawuleza, kwaye azinazimvakalelo.
Iirobhothi ezizenzekelayo zokurhweba ziinkqubo ezizenzekelayo ezisebenza ngokweeparameter okanye iishedyuli ezibekwe ngamaqela abo abathengisi. Nje ukuba idityaniswe kwiakhawunti yakho yorhwebo, iirobhothi ziya kuthi ngokuzenzekelayo zithathe isikhundla kwiimarike zezemali ngaphandle kongenelelo lomntu, olususa iimpazamo ezibangelwa ziimvakalelo zabantu.
Ezi software ziyilelwe ngenjongo yokwenza ukuba inkqubo yokurhweba isebenze kwaye yenze inzuzo ezinzileyo, ngomngcipheko / ukubuya okuhle. Ezi algorithms ziphambili zidityaniswe nobukrelekrele bokufakelwa buhlala buhlalutya imakethi, zivula ngokuzenzekelayo kwaye zivala ukuthengisa ngolawulo olufanelekileyo lwengxowa-mali (ukuhla okuphezulu kwe-3%), kusetyenziswa imiyalelo esekwe kwizalathi zezibalo, zezibalo kunye nezentengiso ezithile. ophethe izifundiswa.
DigiPrime / Pansaka / Pantheratrade, kanye njengeMeta Capital baye baphuhlisa intsebenziswano emininzi kunye neengcali ezahlukeneyo kwintsimi yorhwebo oluzenzekelayo.
Irobhothi nganye inesicwangciso sayo sokurhweba ngokuxhomekeke kwimarike ekujoliswe kuyo. Zihlala zibekwe esweni, zihlaziywa ngokweendaba zezoqoqosho kwaye zilungiswe liqela labarhwebi abaziingcali.
Le nkqubo yokuphucula eqhubekayo ibalulekile ukuze kuqinisekiswe iziphumo eziyimpumelelo zexesha elide. Imarike ye-Forex yindawo emanzi kakhulu kwaye ihlala itshintsha. Eli nqanaba lokuphucula liqinisekisa ukuba i-algorithms ihlala phezulu kwaye yonke into isebenza njengoko kufanelekile.
"Ukuba umtsha kwihlabathi lokurhweba ngeerobhothi, thabatha ingcebiso yam: ukubheja imali ongayifuniyo, vumela umrhwebi aqokelele iimali zakho uzuze kude kube sele ubheja okokuqala. Emva koko, kuphela Ibhonasi. "
Robot / Crypto / ingqokelela.
Nasi esinye sezicwangciso-qhinga zotyalo-mali ukuvelisa ingeniso ye-passive ngelixa usahlula kangangoko kunokwenzeka:
Sebenzisa iirobhothi enye okanye nangaphezulu ngokufaka imali kwi brokerngokulandelelana.
Ngeenzuzo ezivelisiweyo, thenga i-cryptocurrencies kulona tshintsho luphambili (Binance, Coinbase Okanye Crystal.com).
Thengisa okanye ubambe eyakho cryptomonnaies ukuze wenze inzala yenyanga kunye / okanye uthenge iimveliso kunye neenkonzo zemihla ngemihla nge-crypto yakho njenge Binance ikhadi Ukuthenga ukutya, ukulungisa iinwele, i-petroli, imirhumo kunye nokuzonwabisa ...
Iirobhothi ezizinzileyo nezisebenzayo
Tyala imali kwaye wenze izinto ezahlukeneyo
Funda ngakumbi malunga nokuthengisa iirobhothi
Imibuzo / iimpendulo ezi-4
Kutheni uluhlulahlula utyalo-mali lwakho kunye nerobhothi yokurhweba?
Ukutyala imali kwirobhothi yokurhweba yindlela eyandayo enokubonisa ukuba inenzuzo kakhulu. Ke, urhwebo oluphindaphindiweyo lwenza phantse isiqingatha see-odolo ezibekwe eFrance kunye ne-70% yeeodolo ezibekwe eMelika. La manani abonisa ngokucacileyo ukusebenza kolu hlobo lotyalo-mali.
Izibonelelo ezininzi ziya kuqatshelwa ngeerobhothi zorhwebo:
- okokuqala, zenza ukuba kwenzeke ukuvelisa ixabiso elingcono le-asethi, amaxabiso alungelelanisa ngokuqhubekayo kwimfuno yemarike,
- imarike iba lulwelo ngakumbi, kulula ukuthenga nokuthengisa
-banciphisa iindleko zokurhweba zombini iinkampani kunye nabantu
Zeziphi iintlobo zabantu abanomdla wokurhweba iirobhothi namhlanje?
Namhlanje, kukho iintlobo ezininzi zabatyali-mali abasengozini abasebenzisa iirobhothi zokurhweba ngokuzenzekelayo:
Abantu bajonge ukwahlula imithombo yabo yengeniso
Bayanda abantu abafuna ukubandakanyeka kurhwebo ukuze benze ingeniso eyongezelelweyo. Iirobhothi zokurhweba ziyindlela entle kakhulu kule meko kuba zikuvumela ukuba utyale imali kwiimarike zemali ngaphandle kokuba nezakhono ezininzi njengabarhwebi abaziingcali.
Sifumana inani elikhulayo labarhwebi abasebenzisa iirobhothi zokurhweba, njengoko kunjalo ngeerobhothi endikubonisa zona kwiwebhusayithi yangoku. Ewe, ukuthengisa okuzenzekelayo kufuna umsebenzi omncinci ngelixa uvumela ukuvelisa ingeniso enkulu. Abahwebi basanonophele ekukhetheni iirobhothi ezisemgangathweni zokurhweba ezinikezela ngemiqondiso enenzuzo kunye nengcinga.
Amaxesha ngamaxesha otyalo-mali
Abatyalomali bahlala bejonge amathuba okwahlula imali yabo. Iirobhothi zokurhweba yindlela yokutsala ngokuthe kratya kolu hlobo lweprofayile. Ewe, xa aba batyalomali befumana iirobhothi ezilungileyo, abathandabuzi ukutyala imali eninzi.
Kutheni ndibonelela ngoncedo lwam simahla?
Injongo yam kukuxhasa ekubhaliseni iirobhothi ezizisiweyo. Ngendawo yam, ndikubonisa kuphela iirobhothi zokurhweba endiye ndazihlalutya kangangeeveki ezininzi. Ewe kunjalo, kusoloko kukho umngcipheko kuba, masikhumbule, irobhothi nganye yokurhweba ihlala iyingozi kwaye inokuvelisa ilahleko.
Ndikunika lonke ulwazi oludingayo ukuze uqalise ngokurhweba ngokuzenzekelayo, ekuhleni. Injongo kukuba uyazi ngokuthe ngqo into ongena kuyo ngaphandle kokumangaliswa okungathandekiyo xa ufika.
Kubo bonke ubomi bam, bendisoloko ndinomdla wokwabelana ukuze ndivumele abo bandingqongileyo ukuba benze inkqubela. Kuyafana nesiza Robots-Trading.fr. Inyani elula yokwazi ukuba ndithatha inxaxheba kuphuhliso lweprojekthi yakho lwaneliseko lokwenene kum.
Ukurhweba kunye ne-cryptocurrencies ibe yintando yokwenene ukususela ngo-2017. Ndichithe iiyure ezininzi ndihlalutya ezi marike ezintsha kunye nemithombo emitsha yokutyalomali ephuma kubo. Ngoku, injongo yam kukwabelana nawe ngolu thando ukuze ulonwabele.
Iibhothi ezahlukeneyo zorhwebo ezifumaneka ngoku kwiimarike
Namhlanje kukho iindidi ezininzi zeerobhothi zokurhweba. Iprofayili yezi robhothi iyahluka ngokokuphuhliswa kwemarike. Ke, ezinye iimarike zizinzile ngelixa ezinye ziya kuba neendlela ezibalaseleyo, ukungazinzi.
Iirobhothi zokurhweba ezingathathi hlangothi
Uluhlu lweerobhothi zokurhweba zijolise ngakumbi ngakumbi kwiimarike ezizinzileyo kwaye aziguquguquki kakhulu. Ezi robhothi zokurhweba zixhomekeke kwisalathisi sobugcisa (ulandelelwano lwamanqaku oluvumela uhlalutyo lwezibambiso ze-stock market ukuze kuqikelelwe indlela amaxabiso aya kuvela ngayo). Uhlobo lwe-robot yorhwebo luya kuhlola ezi zalathisi zobugcisa ngokuqhubekayo kwaye zenze izenzo zokuthenga nokuthengisa xa imarike ithengwa kakhulu okanye ithengiswa kakhulu.
Iirobhothi zokurhweba ngokulandela okulandelayo
Olu hlobo lwearobhothi yokuthengisa luya kuqinisekisa ukubona izinto ezikhutshiweyo kwintengiso ngokuvula izikhundla ezilandela imeko ephambili yazo. Ke, ngalo lonke ixesha irobhothi ifumanisa imeko enokuba yingeniso, iya kuvula okanye ivale indawo. Qaphela ukuba ithathela ingqalelo kuphela imiqondiso engachasani nesiqhelo.
Amarobhothi aPhezulu aRhwebayo (THF)
Zezona robhothi zorhwebo zinokhuphiswano. Zenziwe ikakhulu ngamaziko emali. Bayakwazi ukwenza iiodolo kwimizuzwana nje embalwa (ukukroba). Injongo yokurhweba rhoqo kukuxhaphaza ukutshintsha okuncinci okuncinci.